Kudala ngoku, unyaka we-10,000 otshayiweyo- uGeofumadas
Kudala, umsi we-10,000 iminyaka
Ngaba ukhe wadibana kuFacebook, unomfanekiso wesikolo owawufunda kuso, watshintsha ngokupheleleyo, wale mihla okanye owayo?
Emva koko uyaqaphela ukuba abaninzi ababehlala kwimeko efanayo ilapha kwi-Facebook, ukumaka kwifoto ethathwe nge-Kodak 110 mm. Njengokuba abantu abaninzi bebonakala ufumanisa ukuba ezinye iifoto zamva nje, zisuka kwindawo enye, zithathwe ngabantu kungekudala, ezikhupha iinyembezi ezifanayo kwi8 yobusuku kwiindawo ezahlukeneyo zeplanethi. Amabali afanayo, ii-anecdotes, abafundi ababuya njengabafundisi zizinto zonke abazithiyileyo, kodwa ukuba iminyaka ye-26 kamva bafuna ukubuyela kwezo ntsuku.
Injalo abantu, siyilahla sketchbook yonyana wethu, kuba ayifanelekanga kwikhabhathi yokufunda. Ikhadi lentombi elincinci le-12 iminyaka, esiya kuthi sizimisele ukunikela ngayo yonke into, ukuba nayo ibe sezandleni zethu, siphile mzuzu kwakhona.
Kudala ngoku Sisiseko esenziwe ngenjongo yokudala izimvo ezinikezela ngeembali ezingafanele ukulahleka ngexesha. Elo xesha lihamba ngokukhawuleza, kangangokuba silibale, ukuba siyabhubhisa, sichithe, kodwa iminyaka kamva sifuna ukuphinda siphinde.
Apha kwaye ngoku, zithetha kuphela kweli gumbi, le mizuzwana ye-5. Kuba ngomso, kunyaka, okanye kwiminyaka ye-10 iya kwahluka ngokupheleleyo. Yintoni ongayithethi kwiminyaka eyi-10,000.
Kudala ngoku iza phantsi kwaloo mbono. Ngeenjongo zokuzonwabisa zokwenza iprojekthi yokulondolozwa kwembali yexesha elide.
Ngoku, ziintsuku ezintathu kuphela: izolo, namhlanje nangomso.
Kule mihla sishumi sokugqibela, esi shumi kunye nesibini esilandelayo ... wow, ayifaki minyaka xa sahlunguze iintloko zethu kwisigqi seCinderella.
Ixesha elide ngoku lixesha leminyaka ye-20,000. Into yokuba igubungela unyaka we-8,000 phambi kukaKristu kude kube li-12,000.
Ngelixa umsi we-astral weentlobo eziphuphayo kakhulu, yindlela apho amathala eencwadi amaninzi, amaziko olondolozo lwembali kunye neeencylopedia zenziwa. Ngomahluko, lo kwimeko uthetha nge "ngoku" ebandakanya i-10,000 kwiminyaka eyadlulayo kunye nesixa esifanayo phambili; Kungenxa yoko le nto amanenekazi ongeze i-zero kwiminyaka (sikunyaka we-02011), elindele into efana ne-Y2K xa unyaka we-9,999 udlula. Umbono, ukwenza into eyimbali kwimbali ende, njengoko ngoku kungoSityehenge okanye iPiramidi yeGiza, ekhoyo malunga ne-4,000 kwiminyaka eyadlulayo.
Ngokuhluka, ukuba into eyenziweyo inokuhlaziywa ngexesha, kwaye umntu okwiminyaka ye-10,000 angayibona into ebesiyenza namhlanje, amasiko ethu, iifashoni, iifom zikarhulumente, isibonelelo ... ngokufutshane, uyabona ukuba bekukho abalimi unyaka u-2011 kwiindawo ezinamagama angenangqondo afana neMexico, Argentina, Spain, Peru, Honduras. Sacinga, sasebenza, silwela ukungabi nantlonelo, senza umzobo womqolomba kwithebhule ye-Ipad 2 kwaye saqhagamshelwa ziibhokisi zeposphor ezingasasebenziyo ezibizwa ngokuba zii-satellite kwaye sakhwaza iindaba ngesikratshi ngolwimi olubizwa ngokuba yi-Twitter.
Kudala ngoku iqwalasela ubuncinci beengxenye ze5 zexesha, ofuna ukugcina imbali:
Umaleko wendalo, ofanele ukubandakanya imifanekiso yasemhlabeni yesatellite, indlela yokuziphatha kwamaqhwa, izinto zendalo, ukugawulwa kwamahlathi, kunye nezinye izinto ezinokuba luncedo kwimiba yokusingqongileyo.
Umaleko wenkcubeko, obandakanya ukubonakaliswa kwe-anthropological ocacisa imimandla eyahlukeneyo yeplanethi, yintoni esenza sahlukile kwaye ke akufuneki sixoxe.
Uluhlu lolawulo, apho kubhaliswa iindlela ezahlukeneyo zikarhulumente kunye nezolawulo kwezopolitiko.
Umaleko wolwakhiwo, kunye nento eyenzekayo phakathi kwethu nendalo. Oko kusinceda ukuthutha, siphile kwaye siphile, okukhona namhlanje nangomso akusekho.
Ungqimba lwezorhwebo, kunye nezinto zoqoqosho zehlabathi, ngoku ziya lusanda kwihlabathi liphela.
Kwaye ekugqibeleni ungqameko lobugcisa kunye nefashoni, apho ukubonakaliswa kobuntu kuya kubonakala khona.
Iya kubonakala ngathi iphupha, ngandlel 'ithile. Kodwa ukuba loo nto yenzekile emntwaneni ukusukela oko yayilwa le khamera, nokuba yayisisiqithi esinye kwisixeko, yayiya kuba nexabiso elikhulu ukuba ibanjiwe ngocwangco. Le projekthi i-Long ngoku isekwe kukusebenzisa ithuba esinalo ngoku, iicomputer kunye nemithombo yolwazi yokugcina ulwazi.
Kule nto kukho izixhobo ezininzi ezizama ukumisela ukuba zingasebenza njani. Phakathi kwazo IProjekthi yeRosseta ukuba ngokusebenzisana kweengcali zeeLwimi ezivela kwihlabathi liphela kwakha uluhlu lweelwimi ezahlukeneyo kunye neziyelelane zehlabathi. Enye into Ukubheja ixesha elide, efuna ukudala uqikelelo lwento enokwenzeka kwixa elizayo. Iserver eside esiyiqondayo yiprojekthi yokugcinwa kolwazi kwaye ukuJonga ixesha elide ingangumbonisi wesitayile esiseMhlabeni kaGoogle kodwa ngezendlalelo ezikuvumela ukuba udibane nembali ngasemva ngendlela esebenzisana nayo.
Kodwa eyona projekthi ibalulekileyo yexesha elide ngoku Iminyaka yokubukela ye-10,000. Iphupha elinobuqili elifuna ukuba iwashi ihlale ngexesha, elinokuthi ligcinwe, ligcinwe ngumqolomba, liqondwe zizizukulwana ezizayo, elisinde ekutshatyalalisweni komhlaba kwaye elinakho ukunika intsimbi kunyaka we-12,000.
Ke, ukuba ngenye imini ufuna ukujoyina isizathu esonwabisayo, Kudala ngoku Inye. Inokubonakala ngokungeyonyaniso kwaye abantu abayibhalisele le mbono bathathelwa ingqalelo njengabaphambeneyo, baphume kwizinto ezisisiseko zabantu. Kodwa abayi kuba kwiminyaka ye-50, ubuncinci kwi-10,000.
Ukuba kukho abo baphupha ngemicimbi yexesha elide, kunokwenzeka ukuba amaphupha exesha elifutshane akufuneki athathelwe ingqalelo njengobudenge.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-2 Ipad, Ukususela kumbono wethu
Post Next Iifoto kunye nevidiyo eziqhayisayo inyikima kunye ne-tsunami eJapanOkulandelayo "